နှလုံးရောဂါ ကာကွယ်ရေး (သို့) လျှော့ချရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » နှလုံးရောဂါ ကာကွယ်ရေး (သို့) လျှော့ချရေး
နှလုံးရောဂါ ကာကွယ်ရေး (သို့) လျှော့ချရေး
Posted by King of Secrets (Bo Min) on Jun 30, 2012 in Society & Lifestyle | 10 comments
နှလုံးရောဂါ ကာကွယ်နိုင်ရန် (သို့မဟုတ်) ဖြစ်နိုင်ခြေလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းအချို.
– နေ.လည်နေ.ခင်း အိပ်ပါ။
-နေ.စဉ် ခရမ်းချဉ်သီး စားဖြစ်အောင် စားပါ။
-တေးဂီတ သံစဉ် အေးအေးများကို နားထောင်ပါ။
-ခိုက်ရန် ခဏခဏ မဖြစ်စေပါနှင့်။ အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်ကိုနိုင်အောင် ထိန်းပါ။
ဒီ ၄ ချက် မှန်မှန် လိုက်နာပါက နှလုံးရောဂါ သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်ပါသည်။
This is fromaknowledgeable person.
ဒီထဲမှာ မပါတဲ့ အချက်တစ်ခု ဖြည့်စွက်ချင်ပါတယ် ….
ရည်စားမထားခြင်းဖြင့်လည်း နှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပါ … ဟိဟိ
ရည်းစားထားပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်မှာစိုးရင် ဒေါက်တာများက အကောင်းဆုံး ဟီဟိ
အောင်မငှီး … ကပေလုပ်တာနဲ့ သူများတွေ သိကုန်ပြီ …. ။ ဒါထိပ်တန်းလှို့ဝှက်ချက်လေ ..အဟိ
ွွှှTop secret က တော်တော်လဲ သိနေကြပါပြီ ma etone ရေ။
နှလုံးရောဂါ သက်သာအောင် နံပါတ် (၁) အချက်ကို စတင်စမ်းသပ်စဉ် အလုပ်ဖြုတ်ခံရကိန်းမြင်ပြီး၊
(၁) ကို ignore လုပ်မှဖြစ်မယ်။
Key Key may correct because of job, so do others 3.